Ukuqeqeshwa nokuphathwa kokusebenza kweCamei 2020 | I-Camei Ele ne-Stationery
Ukuqeqeshwa nokulawula ukusebenza kweCamei 2020
Ukuze kuqiniswe ngempumelelo ukuphathwa kokuncoma ukusebenza kwabo bonke abasebenzi benkampani, futhi kunikezwe ukudlala okugcwele ekuqondisweni nasekukhuthazeni nasekuvinjelweni kokuncoma ukusebenza, ngoJulayi 28, inkampani yahlela ukwethulwa egumbini lokuhlangana esitezi 3 esitezi isakhiwo samahhovisi kuNo. 3 Yuanxiang Street, Jiangnan High-tech Industrial Park, eQuanzhou City [2020 Performance Management Training and Learning], ngaphezu kwe-20 abaphathi abaphakathi nendawo nabaphezulu abavela eJiamei Stationery bahlanganyele kulokhu kuqeqeshwa.
Kulokhu kuqeqeshwa, inkampani imeme uMnu He Huan kanye noMnu Chen Ping waseBeijing Changsong Group ukuthi bazonikeza izinkulumo. Izinkulumo beziqhutshwa ngendlela "yezinkulumo zothisha nokudlala ekilasini". Ekilasini, othisha laba bobabili bahlaziya babuye bachaza ukusetshenziswa okunganele kwe- “irayisi elikhulu lembiza”, “i-egalitarianism” kanye “nokungahlekisi” kwezinye izinkampani.
Abantu bayimbangela enkulu yezemvelo yabasebenzi ebhizinisini. Bakwazi ukuhola nokukhuthaza, futhi bangadonsa amandla amakhulu afihlwe ngaphansi kweqhwa. Ukwenza ukuhlola ngokusebenzisa izinto ezenziwayo kanye nokufingqa i-crux yeqembu kudatha kungathuthukisa amandla weqembu le nkampani libe sezingeni eliphakeme.
Ngokulandisa kothisha, wonke umuntu uxoxe ngesipiliyoni sanamuhla nesipiliyoni, nokuthi angayisebenzisa kanjani emsebenzini olandelayo ukwenza ngcono ukuncintisana nokubumbana kweqembu, futhi kugqugquzelwe ukwenziwa ngcono komsebenzi weqembu.
Namuhla, othisha ababili abaqhamuka eChangsong Group bafundisa ngesineke. Njengamanje, ezinye izinkampani zinezinkinga zokuphatha, ezifana nesakhiwo samaholo okungenangqondo futhi azikho izindlela ezinhle zokuncoma ukusebenza. Esinyathelweni esilandelayo, inkampani izothuthukisa futhi inqubo yokuhlola, ukukhuthaza kanye nokuvimbela, iqinise ukusebenza kanye nokusetshenziswa kwemiphumela yokuhlola, iphinde ikhuthaze ukuthuthukiswa kwamazinga okuphathwa kwangaphakathi kwenkampani ukuqinisekisa ukuphothulwa ngempumelelo kwezinhloso zenkampani.
Isikhathi sokuthumela: Jul-29-2020
No.3 Yuanxiang St. Jiangnan New High-Tech Ulwazi Lwama-elekhthronikhi Ipaki Yezimboni Quanzhou362000, Fujian, China
Isitimela sokulawula ukusebenza seCamei 2020 ...